Halyayga kooxda Real Madrid Jorge Valdano oo talo muhuum ah u diray Francisco Isco – Gool FM
Manc City oo ku dhow inay dhammeystirto saxiixeedii saddexaad ee xagaagan
Quique Setién oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka adag ee Bayern Munich
Xiddig ka tirsan kooxda Barcelona oo laga helay caabuqa Korona
Juventus oo saddex xiddig u soo bandhigtay kooxda Arsenal si ay kaga hesho Alexandre Lacazette
Waa kee xiddiga ka tirsan Barcelona uu Andrea Pirlo soo dhaweeyay inuu yimaado kooxda Juventus?
Michael Owen oo saadaaliyay kulamada wareega siddeeda ee Champions League… (Muxuu ku saadaaliyay kulanka Bayern iyo Barcelona?)
Halyayga kooxda Real Madrid Jorge Valdano oo talo muhuum ah u diray Francisco Isco
(Real Madrid) 10 Jan 2019. Isco oo ku soo bilaawday kursiga keydka kulankii ay xalay Real Madrid kula ciyaartay Leganes Copa del Rey, ayaa si weyn loo hadal hayaa maanta, wuxuuna sidoo kale helayaa talooyin badan.
Real Madrid ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Leganes, kadib markii ay ku garaacday 3-0, kulankanka lugta hore ee ka tirsanaa kulamada wareega 16-ka ee tartanka Copa del Rey, kaasoo ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu.
Santiago Solari ayaa go’aansaday inuu Isco ka saaro line-upkiisa koowaad, wuxuuna doorbiday inuu ku soo bilaawdo kursiga keydka, taasoo ka dhigtay in shaki xoogan la galiyo mustaqbalka khadka dhexe reer Spain.
Hadaba Jorge Valdano oo ah ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid iyo falanqeeyaha cayaaraha ee Radio Onda Cero ayaa talo muhiim ah u diray khadka dhexe reer Spain ee Isco, isagoo ka codsaday in qaab ciyaareed cajiib ah uu ku dhex sameeyo gudaha garoonka.
“Isco waa inuu ogaadaa, in xaaladahan oo kale ay yihiin kuwa aad wax ku heli karto ama aad ku weyn karto gudaha garoonka”
“Wuxuu jecel yahay in naftiisa uu muujiyo inuu yahay dhibane, ee uma muuqda inuu yahay ciyaaryahan dadaal badan”.
Guardiola ayaa si uu u SABARSIIYO Macalinkii uu sida Xun Xalay u Xasuuqay u bandhigay inuu.....!!!
WEERARYAHAN mise DAAFAC: Sergio Ramos oo Xalay dhaliyay goolkiisii 100-aad